>ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..မှတ်သားစရာပါပဲ..ကျေးဇူး..Word verification ကြီးဖြုတ်လိုက်ရင် မန့်ရတာပိုမြန်မယ်ထင်ပါတယ်..
>ကောင်းတဲ.ဗျာ … ရေးထားတာလေးတွေကတစ်ချို. ပိုက်ဆံစွတ်ရှာပြီး သားသမီးဂရုမစိုက်ကြတဲ. မိဘတွေ ဖတ်စေချင်တယ် … ဆက်ရန်လေ မျှော်နေမယ်ဗျာ…
>ဟုတ်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျ။ အဟဲ။ =)
>ဒုတိယ ပိုင်းလဲ ကောင်းတယ်အကို ရာ ဒီစာမူလေးကို ဗဟုသုတ စာစောင်လေးဒါမမဟုတ် ဗဟုဟုတ ဂျာနယ်မျိုးဆီပို.ကြည်.ပါလားအကို မိဘတိုင်းအနည်းအကျဉ်းတော. သိထားသင်.ပါတယ်..အားပေးလျက်…
>ကိုချမ်းလင်းနေ ရေးတတ်လိုက်တာနော်။ ကိုချမ်းလင်းနေမှာ သားသမီးတွေရောရှိလား။ ဘာရယ်လို့ဟုတ်ဖူးလေ။ စပ်စုကြည့်တာပါ။ ဦးဇင်း "စာဖတ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း အကျင့်ဗျ။ လုပ်ယူမှရတာ။ မလုပ်ယူပဲ ဘယ်ကလေးမှ အလိုလျှောက် စာဖတ်ဝါသနာမပါကြပါဘူး" ဒီအပိုဒ်ကိုကြိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးဇင်းလည်း ဘလော့လေးရေးဖြစ်ခါမှ စာတွေအရင်ထက် ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ စာမဖတ်ရင် ခေါင်းကုတ်လည်း ထွက်မလာပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဘုရားဟောကို ကိုးတဲ့အခါမှာ မှားသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်တယ်။
>စာတွေ့ထက်လက်တွေ့ ကပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ ကိုချမ်းလင်းနေရေ
>မိဘက မိဘတာဝန်၊ သားသမီးက သားသမီး တာဝန်တွေ အချင်းချင်း ကျေပွန်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ မိသားစု တိုင်းပြည်ကြီးလဲ အမှန်တကယ် တိုးတက်လာမှာပါ။ခင်မင်လျက်ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)